यी हुन् रियालिटी शोका कारण २०७६ मा लोकप्रिय बनेका पुर्बेलीहरु (भिडियो सहित) – दैनिक नेपाल न्युज
यी हुन् रियालिटी शोका कारण २०७६ मा लोकप्रिय बनेका पुर्बेलीहरु (भिडियो सहित)
ईटहरी । कोरोनाको त्रासले २०७६ को दु:खद अन्त्य भए पनि यो वर्ष कला क्षेत्रमा प्रदेश १ अर्थात पुर्वेलीहरुको लागि भने सुखद नै रहन पुग्यो । ०७६ मा पुर्वका झन्डै दर्जन नव प्रतिभालाई रियालिटी शोले खुबै लोकप्रिय बनायो । पुर्वले यो पटक देशमा भित्रिएको अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चाईज टेलिभिजन रियालिटी शो संगै नेपाली अर्गानिक टेलिभिजन रियालिटी शो र देश बाहिर पुगेर सौन्दर्य प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्यो ।
पूर्व ईटहरिका सुमन कोईराला, धरानका प्रनेश गौतम, मोरंगका सुमन कार्की कमेडी च्याम्पियनका माध्यमबाट २०७६ मा चर्चित बने भने बलबहादुर राजवंशी, राम लिम्बु र मेचु धिमाल द भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ का कारण चर्चामा आए । यता मिस वर्ल्ड तहकै मानिएको ‘मिस लुमियर वर्ल्ड’मा पहिलो पल्ट नेपालि सहभागी भएर धरानका सिम्रन श्रेष्ठ चर्चामा आए भने झापाकी रचना रिमाल नेपाल आईडको तेश्रो सिजनबाट चर्चामा आईन । हेर्नुस् पुरा जानकारी सहितको भिडियो…
नेपालीलाई गर्व लाग्ने विक्रम संवतको वैज्ञानिक महत्त्व ! आफूले पनि बुझौं र अरुलाई पनि बुझाऔं !!